Asian Traveler: Melaka သို့အလည်ခရီး
Melaka ခရီးစဉ်ကို ပထမတစ်ခေါက်ကတည်းက ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ အခုဒုတိယအခေါက် ရောက်မှပဲ ရေးဖြစ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်မလကာကို ပထမအခေါက်စရောက်တုန်းကတော့ Private Tour အနေနဲ့ပါ။ Melaka က မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းဇော်နဲ့ ကိုထွန်းထွန်းလင်းကပဲ အစစအရာရာကူညီခဲ့လို့ နေရာအတော်များများကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့တော့ 19.07.2009 ရက်နေ့မှာ Smart Holiday Travel ကုမ္ပဏီနဲ့ Melaka ကိုသွားလည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုတစ်ခေါက်ကတော့ Package Tour နဲ့ရောက်တာပါ။ Package Tour ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ နေရာတစ်ခုရောက်တိုင်း မိမိစိတ်ကြိုက်လေ့လာဖို့ အချိန်သိပ်မရခဲ့ပါဘူး။ ပိုဆိုးတာ Kuala Lumpur ကနေပြီး နေ့ချင်းပြန်ခရီးဖြစ်နေတာပါပဲ။ အသွားအပြန်ကြာချိန်ကပဲ ကားပေါ်မှာပဲ5 နာရီလောက် အချိန်ပုတ်သွားပါတယ်။ Melaka ကိုသွားဖို့အတွက်စုရပ်ကတော့ Time Square နားက ဘူကစ်ဘင်တန်းမှာပါ။ ကားက ၈နာရီထွက်မယ်ဆိုတော့ ရုံးကအစ်မကိုသွားခေါ်ဖို့အတွက် နံနက်၆နာရီကတဲကထပြီး ရေမိုးချိုး၊ ယူစရာရှိတာတွေယူပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ရုံးကအစ်မအိမ်ကနေပြီးတော့မှ LRT Station ဖြစ်တဲ့ Bandar Tasek Selatan ကိုသွားလိုက်တယ်။ အဲဒီ့မှာက ကားပါကင်ထိုးဖို့အဆင်ပြေတယ်လေ။ တစ်နေကုန်ရပ်မှ RM3ကျပ်ပဲကျတာမို့ အဲဒီ့မှာကားထားပြီးမှ ဘူကစ်ဘင်တန်းကို LRT နဲ့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲပဲ LRT နဲ့ Time Square Shopping Mall ကိုရောက်တော့ အတူလိုက်မယ့် သူငယ်ချင်းဝင်းသန်းက မရောက်သေးတာမို့ ဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်ရသေးတယ်။ သူနေတဲ့နေရာက KLCC Tower ရှေ့နားတင်မို့ သိပ်မဝေးပေမယ့် သူစီးလာတဲ့ကားက ပြန်ပတ်နေလို့ကြာနေတယ်တဲ့လေ။ အဲဒါနဲ့ ဆင်းပြီး Taxi သာငှားလာခဲ့တော့ဆိုပြီး ပြောလိုက်ရတယ်။ ခဏနေတော့ အချိန်မှီပါပဲ 8နာရီမထိုးခင်လေး ရောက်လာတယ်။ ကိုယ့်အဖွဲ့ကတော့ လူစုံပြီ ဒါပေမယ့် ကားကမထွက်သေးဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူမစုံသေးလို့တဲ့။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ 8နာရီခွဲခါနီးမှ ကားထွက်ဖြစ်တော့တယ်။ လမ်းမှာ အပေါ့အပါးသွားဖို့အတွက် ကားထွက်ခါစမှာ တစ်ခါရပ်ပေးပါတယ်။ နောက် ရောက်ခါနီးမှာတစ်ခါ ရပ်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Melaka ကို နံနက် 10:45 မှာရောက်ပါတယ်။
Bukit China အောက်ခြေရှိ Poh San Teng ရှေးဟောင်းဘုံကျောင်း
တရုတ်မင်းသမီး Hang Li Po လှုဒါန်းခဲ့သောရေတွင်း
Bukit China ရှိ Dutch လူမျိုးများ၏ရှေးဟောင်းဂူင်္သချိုင်း
Melaka ရောက်တော့ Bukit China ကိုအရင်ဝင်ပါတယ်။ ရောက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကားက ဧည့်လမ်းညွှန်ကလဲ တစ်ဖွဲ့လုံးမှာတရုတ်လူမျိုးအများဆုံးသာပါတဲ့အတွက် တရုတ်လိုချည်းရှင်းပြပါတော့တယ်။ တစ်ကားလုံးမှာလဲ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က မြန်မာငါးယောက်နဲ့ ဘင်္ဂလားလူမျိုးတစ်ယောက်သာပါပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါမှ သိချင်တာရှိရင် သူ့ကိုမေးလို့ ရပါတယ်ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပါတယ်။ ကျွန်တော့အထင်တော့ ဒီ Tour Guide က Professional မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ Melaka မြို့ရဲ့ 15 ရာစုနှစ်က ရှေးဟောင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ Bukit China (Chinese Hill) ကိုသွားပါတယ်။ Bukit China ရဲ့ရာဇ၀င်ကတော့ 15 ရာစုနှစ်က Melaka စူလတန်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ Mansur Shah ဟာ တရုတ်မင်းသမီး Hang Li Po ကို ငါးယောက်မြောက်မိဘုရားအဖြစ် လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်လေးဟာ တရုတ်လူမျိုးများနဲ့ Melaka ဘုရင်များရဲ့အရေးပါတဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်လေးပါ။ အဲဒီ့နောက်စူလတန်ဘရင် Mansur Shah ဟာ တရုတ်မင်းသမီး Hang Li Po ကို လက်ထပ်ပွဲအမှတ်တရအနေနဲ့ Bukit China (Chinese Hill) ကို လက်ဆောင်အဖြစ် အပိုင်စားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်ပိုင်း 17 ရာစုကစပြီး Bukit China ဟာ Melaka မြို့ရှိတရုတ်လူမျိုးများရဲ့ ဂူသချိုင်းများမြှုပ်နှံရာအရပ် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လဲ Bukit China ရောက်တော့ ဓါတ်ပုံရိုက်လက်ဆောင်ပစ္စည်း ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကြည့်ရင်း Bukit China အောက်ခြေနားမှာရှိတဲ့ Poh San Teng ရှေးဟောင်းတရုတ်ဘုံကျောင်းကို ဆက်သွားပါတယ်။ ဒီဘုံကျောင်းမှာ တရုတ်မင်းသမီးလှုဒါန်းထားတဲ့ Hang Li Po Well ရှိပါတယ်။ ဒီရေတွင်းကို 1459 ခုနှစ်မှာတူးခဲ့တာပါ တစ်ခါမှ မခြောက်ခန်းခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Poh San Teng ရှေးဟောင်းဘုံကျောင်းကို ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ၀င်လေ့လာဖို့ အချိန်နဲသွားတာကြောင့် ဓါတ်ပုံပဲအမြန်ရိုက်ပြီး 11:45 လောက်မှာ ပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
Melaka ရှိ China Town
China Town ရှိတရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဆိုင်
Melaka နာမည်ကျော် NyoNya Food စားသောက်ဆိုင်
အဲဒီ့ကနေပြီး Eye On malaysia သွားတဲ့လမ်းအတိုင်းကနေပြီး Makota Hotel နားက Melaka ရဲ့နာမည်ကြီး အစားအစာတစ်ခုဖြစ်နဲ့ Nyonya Food ဆိုင်မှာ နေ့လည်စာစားကြပါတယ်။ NyoNya Food ကတော့ တရုတ်နဲ့ မလေးဟင်းလျှာ နှစ်မျိုးပေါင်းအစပ်ချက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးကဟင်းလျှာတွေကတော့ အရသာရှိပါတယ်။ ဟင်းလျှာတွေကို အစပ်ချက်တယ်ဆိုပေမယ့်လဲ သိပ်မစပ်ပါဘူး။ ဆိုင်လေးကကျဉ်းပေမယ့် ၈ ယောက်ဝိုင်းစားပွဲ ၁၈လုံးလောက်ဆံပါတယ်။ နေ့လည်စာ စားပြီးတဲ့နောက် 12:30 မှာ Stamford College မျက်စောင်းထိုးမှာရှိတဲ့ Tan Kim Hock တရုတ်ဆေးနဲ့ မုန့်တွေရောင်းတဲ့နေရာကို သွာပါတယ်။ Tam Kim Hock မှာ Consididated Laboratory (M) Sdn Bhd. ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ တရုတ်ဆေးနဲ့ လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးနိုင်တဲ့ မုန့်မျိုးစုံကို ရောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကတော့ အထဲဝင်ကြည့်လိုက် အနီးနားမှာပဲ ဓါတ်ပုံသွားရိုက်လိုက်နဲ့ပဲ နေနေလိုက်ပါတယ်။ Tam Kim Hock မှာဘာမှတော့သိပ်မ၀ယ်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းနဲ့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စနောက်နေရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဝင်းသန်းက ကားပြန်အထွက်မှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ သူများကားပေါ်မှားတက်မိလို့ အဟားခံလိုက်ရပါသေးတယ်။ သူလဲကားမှားတက်မှန်းသိတော့မှ ရှက်ရှက်နဲ့ပြန်ဆင်းလာရတယ်။
Tan Kim Hock ရဲ့မျက်နှာစာပါ
Stamford College ရှေ့တွင်သူငယ်ချင်းနဲ့အမှတ်တရ
Tan Kim Hock ကနေပြန်အတွက်မှာတော့ Melaka ရေလက်ကြားနားက Mahkota ကိုသွားပါတယ်။ Mahkota ဆိုတာကတော့ မလေးဘာသာစကားအခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကတော့ခံတပ်ကိုဆိုလိုတာပါ။ Melaka မှာတော့ဒီနေရာက နိုင်ငံခြားခရီးသည်များဆုံး လာရောက်လည်ပါတ်တဲ့နေရာပါ။ အဲဒီ့ရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ Tour Guide က သူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြဖို့ပြောပါတယ်။ သူကနေပြီးဦးဆောင်ပြီး Mahkota အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့နာရီဝက်အချိန်ပေးပြီး ရှေးဟောင်းခရစ်ယန်ချက်ကျောင်းနားမှာ ပြန်ဆုံဖို့ပြောပါတယ်။ ဒီနေရာကအရင်တစ်ခေါက်တုန်းကရောက်ပြီးသားမို့ နေရာအတော်များများကို မှတ်မိနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ပါလာတဲ့အဖွဲ့ကို Melaka တူးမြောင်းနားမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပြီး ကျန်အဖွဲ့တွေကို စောင့်နေလိုက်ပါတယ်။
Melaka ရှေးဟောင်း ခရစ်ယန် Church ကျောင်း
လူစုံတဲ့အခါမှာတော့ Tour Guide ကပဲဦးဆောင်ပြီး Paul Hill (Bukit St. Paul) ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကုန်းရဲ့အပေါ်မှာတော့ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ St. Paul Church နဲ့ A' Famosa Fortress ရှိပါတယ်။ ပေါ်တူဂီလူမျိုးတွေက 1571 မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ တောင်ကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့မှာ Melaka မြို့ရှုခင်းနဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုလှပစွာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Tour Guide ကတော့ ဒီနေရာအကြောင်းကို ရှင်းပြတယ်။ ရှုခင်းလှတဲ့အတွက် အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့သူအတော်များများကိုလဲ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Church အတွင်းပိုင်းထဲကို ၀င်ပြီးလေ့လာပါတယ်။ အတွင်းမှာတော့ Portuguese ဘာသာစကားနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ ကျောက်စာအတော်များများကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါအပြင် ခရစ်ယန်လူမျိုးများ နှစ်ခြင်းခံတဲ့နေရာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာကိုတော့သံလှောင်အိမ်တစ်ခုနဲ့ ကာရံထားပါတယ်။ အတွင်းထဲမှာတော့ ငွေအကြွေစေ့အတော်များများကို တွေ့ရပြီး ဒီနေရာဟာဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ အယူရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲပါလာတဲ့ငွေအကြွေစေ့လေး ပစ်ထည့်ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဘာဆုတောင်းတယ်ဆိုတာတော့ မပြောတော့ဘူးနော်။ အဲဒီ့နောက်အတွင်းပိုင်းထဲ ဆက်ပြီးဝင်ကြည့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ အလင်းရောင်းကို သိပ်ကောင်းစွာမရတော့ပါဘူး။ ကျောက်စာအတော်များများကိုပဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အတွင်းထဲမှာတော့ အလင်းရောင်လုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက် ဓါတ်ပုံတွေ မရိုက်ခဲ့တော့ပါဘူး။
St. Paul Church အကြောင်းရှင်းပြနေသော Tour Guide နှင့် အဖွဲ့သားများ။
A' Famosa ရှေးဟောင်းခံတပ်
St. Paul Church ကနေပြီးတော့ တောင်ကုန်းအောက်ကိုဆက်ဆင်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ ပေါ်တူဂီတို့ရဲ့ A' Famosa ရှေးဟောင်းခံတပ်ကိုတွေ့ပါတယ်။ ဒီရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ခံတပ်ကို ပေါ်တူဂီတွေက Melaka စူလတန်စစ်သားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရာမှာ ခံတပ်အဖြစ်အသုံးပြုဖို့ ကွန်မန်ဒါတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Alfonso de Albuquerque ကနေပြီးဆောက်လုပ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ခံတပ်ဆောက်လုပ်ပြီး တောင်ကုန်း အနီးတ၀ှိုက်နှင့် ပင်လယ်အတွင်းရှိ စူလတန်ဘုရင်ရဲ့စစ်တပ်ကို ရာစုနှစ်အတော်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်ထိ Melaka မှာ ပေါ်တူဂီအနွယ်တွေကို တွေ့နေရဆဲပါ။ A' Famosa ရောက်တဲ့အခါမှာ Tour Guide ကနေပြီး ဒီနေရာမှာ လည်ပတ်ဖို့အတွက် အချိန် ၁နာရှိထပ်ပေးပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ကပဲ သူငယ်ချင်းကို ဦးဆောင်ပြီး Samudera Museum ကိုသွားပါတယ်။ Samudera Museumဟာ ရှေးခေါတ်ရွက်လှေထဲမှာ ပြတိုက်လုပ်ထားတာပါ။ ပြတိုက်ဝင်ကြေးကတော့ လူတစ်ဦးကို မလေးရှား ရင်းဂစ်3ကျပ်ကျပါတယ်။ ပြတိုက်ထဲမှာကတော့ ရှေးခေါတ်လှေထိုးသားအရုပ်တွေ၊ သဘောင်္ကပ္ပတိန် စတဲ့အရုပ်များကိုပြသထားပြီး ရှေးခေါတ်အသုံးအဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ပုဂံခွက်ယောက်၊ ရှေးဟောင်းအမြှောက်စသည့်အပြင် သင်္ဘောပုံစံငယ်လေးများကိုပြသထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အချိန်သိပ်မရှိတာကတကြောင်း ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကလည်း ဒီနေရာကိုရောက်ပြီးသားဆိုတော့ ပြတိုက်ထဲကိုထပ်မ၀င်တော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းကိုပဲရှေ့နားမှာဓါတ်ပုံရိုက်ပေးလိုက်ပြီး ပြတိုက်ရှေ့က အအေးဆိုင်မှာပဲ ခဏထိုင်လိုက်တော့တယ်။ အအေးဆိုင်ထိုင်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့လဲ အားလုံးစုရပ်ဖြစ်တဲ့ Melaka Megamall ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။
Melaka သို့ပထမအခေါက်ရောက်စဉ်က St. Paul Church တွင်အမှတ်တရ
Melaka မြို့လယ်ရှိ Francis Xavier's Church ကျောင်း Melaka Megamall မှပြန်အထွက်
အဲဒီ့မှာလူဆုံတော့ Tour Guide ကနေဦးဆောင်ပြီး ကားရပ်တဲ့နေရာကို ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ကားပေါ်ရောက်လို့ လူစုံတဲ့အခါမှာတော့ 3:15 မှာ ကွာလာလမ်ပူကို ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အလာတုန်းကလိုပဲ လမ်းမှာအပေါ့အပါးသွားဖို့ ကားနှစ်ကြိမ်ရပ်ပေးပါတယ်။ လမ်မှာလဲ တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တာကြောင့် စင်္ကပူကပြန်လာတဲ့ကားတွေ၊ ဂျိုဟိုးကပြန်လာတဲ့ကားတွေနဲ့ လမ်းတစ်လျှောက် ကားတွေပိတ်နေပါတယ်။ ကွာလာလမ်ပူကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ညနေ 6:45 ရှိနေပါပြီ။ ဘူကစ်ဘင်တန်းကနေပြီးတော့ မြန်မာဆိုင်တွေရှိတဲ့ Kotaraya ကိုပြန်လာပြီး မြန်မာဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ မုန့်ဟင်းခါးစားကြသေးတယ်။ အဲဒီ့ကနေလမ်းခွဲကြပြီးမှ LRT Station ဖြစ်တဲ့ Plaza Rayat ကနေပြီး Bandar Tasek Selatan Station ကို LRT နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက် ရုံးကအစ်မကို သူ့အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲပါတော့တယ်။ ဒီခရီးစဉ်ဟာ သွားပြီးသားခရီးဖြစ်ပေမယ်လို့ ခရီးသွားတာဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော့်အဖို့ မရိုးနိုင်ပါဘူး။ ခရီးသွားရတဲ့အတွက် အတွေ့အကြုံသစ်တွေကိုလည်းရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်ခရီးသွားဖို့အတွက်လဲ အသင့်ပြင်ဆင်နေဦးမှာပါ။
ဒေါ်လင်းလင်းရေ ရောက်တယ်ဗျိုးးးးသိလား ဟဟဟဟဟ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်သွားတယ်နော် မမလှလှလဲ ကြည့်သွားတယ် ဟီးးး
hi ko linn,
ur photo are colourful.
see u.BYE BYE.